Mourinho Oo Garsooraha iyo Nasiib Darro U Sibir Saaray Guuldaradii Watford
HomeWararka MaantaMourinho Oo Garsooraha iyo Nasiib Darro U Sibir Saaray Guuldaradii Watford
Manchester United tabobareheeda Jose Mourinho ayaa dareemaya in garsoorihii ciyaarta dhex-dhexaadinayay iyo nasiib daro kooxdiisa haysata ay sabab u ahaayeen, guuldaradii Watford, laakiin hadana aqbalay in qaab ciyaareedka naadigiisu u baahan yahay horumar wax badanina ay ka dhiman yihiin.
Goolal ay kala dhaliyeen Etienne Capoue iyo Marcus Rashford ayay ciyaartu barbar dhac 1-1 ah ku noqotay, kuna socotay ilaa todoba daqiiqo dhamaadka kulanka loo jirsaday, markaas oo laacibka bedelka ku soo galay ee Juan Zuniga gool uu ka dhaliyey iyo rigoodhe uu saxeexay kabtan Troy Deeney ay Watford u horseedeen guul 3-1 inay ku dhex tirsadaan garoonkooda Vicarage Road.
United waxay sidaas ku fadhidaa boos lix dhibcood ay kaga dambeyso kooxda hogaanka horyaalka Premier League ku naaloonaysa ee Manchester City, waxaanay Mourinho guuldaradan saddexaad ee xidhiidhka ahi ka dhigtay in markii ugu horeysay horyaal sidan oo kale qabsato tan iyo markii uu Porto u ahaa macalinka ee xili ciyaareedkii 2001-02.
Tabobaraha reer Portaqiis ee khal-khalsani, wuxuu aaminsan yahay in Anthony Martial la soo xanaaqadeeyey kubbadii ay Watford goolka koobaad ku dhashatay, wuxuuna ku dooday in naadigiisu gacanta sare lahaa, markii labada gool ee guusha sida deg-dega ah looga dhalinayay.
Wuxuu ku yidhi BT Sport: “Qaybtii hore ee ciyaarta 25 ilaa 30 daqiiqo ee bilowga ahaa, maanaan ciyaarin kubbad fiican, arintaasina waa mid aanu xal u helli karno. Waanu horumarin karnaa, waanan ka shaqayn karnaa sidii aanay u dhici lahayn mar dambe.
“Laakiin arinta garsoorka iyo callan-wadeyaashu maaha mid aanu anagu xalin karno oo gacantayada ku jirta. Wax isbedel horumarin ah oo aan ku samayn karaana ma jirto. Taasina waa xaalad mar walba taagan.”
Mourinho wuxuu hadalkaas mid lamid ahna sidoo kale ciyaarta kadib u sheegay idaacada BBC da qaybteeda ciyaaraha.
Daawo Casharkii Munich u Dhigtay Chelsea
25/07/2017 Abdiwahab Ahmed
All Goals and Highlights: Nottingham Forest 4-2 Arsenal